Kiraa maashinoota konistiraakshinii | | Awash Tenders
Kiraa Maashinoota Konistiraakshinii
Hababo Guduru Roads Authority
Caalbaasii Kiraa Maashinoota Ijaarsaa
Abbaan Tayitaa Daandiwwanii Aanaa Habaaboo Guduruu bara baajata 2013 suphaa daandii hojjechuuf maashinoota konistiraakshinii adda addaa kireeffatee hojjechiisuu barbaada. Kanaafuu, namoonni ulaagaa ibsame guuttan dorgomuu ni dandeessu.
1. Heyyama daldalaa kan bara 2013 kan haareffate.
2. Lakkoofsa kaffalaa gibiraa TIN kan qabu.
3. Ragaa galma’aa VAT Ta’uu isaa kan ibsu kan dhiyeessu.
4.WMWD Naannichaan qofa tarree dhiyeessitootaa keessatti dorgomaa galma’an qofa ta’uu qabu.
5. Dorgomtoonni kabachiisa caalbaasii CPO qarshii 20,000 maallaqa baankii irraa abbaa pirojeektiif kan barreeffame qabsiisuu qaba.
6. Dorgomaan caalbaasii mo ate kabachiisa waliigaltee gatii waliigalaa qabsiisuu qaba.
7. Maashinoota tarreeffaman hunda bakka tokkotti dhiyeessuu kan danda’u yoo ta’u, qoqqoodanii dorgomuun hin dandaa’amu.
8. Xalayaa qulqullummaa kaffalaa gibiraa ta’uu isaa ibsu waajjira A/T Galiiwwanii irraa dhiyeessuu qabu.
9. Dorgomtoonni sanada caalbaasichaa Waajjira/ATG/Aanaa Habaaboo Guduruu irraa qarshii hin deebine 100 qofa kaffaluun bitachuu qabu.
10. Caalbaasichi guyyaa beeksifni caalbaasiin kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfamee bahe irraa kaasee guyyaa hojii walitti aanaan 15f erga qilleensa irra oole booda guyyaa 15ffaa hanga sa’a 11:30tti piroposaalaa faayinaansii fi tekinikaa qophaatti orijinaalaa fi koppii jechuun dhuma irratti poostaa tokko keessatti saamsamee saanduqa qophaa’e keessatti saamsamee saanduqa qophaa’e keessatti galuu qaba. Guyyaan hojii yoo ta’uu baate guyyaa itti aanutti bakka dorgomtoonni ykn bakka bu’oonni seeraa argamanitti sa’atii 11:30 tti cufamee gaafa guyyaa 16ffa saatii 4:30tti Kutaa itti Aanaa Bulchaa Aanaa Habaaboo Guduruutti ni banama.
11. Maqaan dorgomaa, abbaa pirojeektii, maqaa pirojeektii, mallattoo fi chaappaa dorgomaa fi abbaa pirojeektii poostaa gubbaatti ifatti barreeffamuu qaba.
12. Sanadicha iſratti haqamnii fi laaqamni jiraachuu hin qabu.
13. Qaamni mo’ate liibiree fi waliigaltee kiraa maashinootaa dhiyeessuu qaba.
14. Dorgomaan mo ate maashinoota dhiyeessuu hundaaf boba’aa fi geejiba fiduu fi deebisuu akkasumas baasiwwan kanaan walqabatan ofii isaatii uwwisuu danda’uu qaba.
Waajjirichi mala ykn filannoo biraa yoo argate caalbaasii kana gartokkees ta’ee guutumaan guutuutti haquudhaaf mirga guutuu qaba. Odeefannoo dabalataaf Lakk. bilbilaa 0965411399 Gosa Maashinaroota Ijaarsa Suphaa Daandiif Oolan.
Gatii sa’atiin itti guutamuu
Iskaavatara CAT324 fi isaa ol
Gireedara CAT 140H fi isaa ol
Shower Truk Abbaa 16m3
fi isaa ol
Roller Abbaa Toonii 16M3 fi isaa ol
Gatii sa’atiin itti guutamu
Dumpi Tiraakii 16M3 fi isaa ol
Gatii giddugaleessa ykn Average (A+B)
Average A+B VAT
Gatii waliigalaa Average (A+B)
Hubachiisa Gatii loobedii waliin guuttachuu qabu. Abbaan Tayita Daandiwwanii Aanaa Habaaboo Guduruu